October 6, 2020 - Padaethar
October 6, 2020 by Padaethar
FB ပေါ်မှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ ပုံလေးရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရဲရင့်မှုတွေပါတဲ့ မျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့အဖြစ်မှန်
FB ပျေါမှာ အရမျးဟော့နတေဲ့ ပုံလေးရဲ့ ယုံကွညျမှုတှေ ရဲရငျ့မှုတှပေါတဲ့ မကျြရညျဝိုငျးရတဲ့အဖွဈမှနျ မူရငျးဓါတျပုံပိုငျရှငျ ကို Thiha Tun ရိုကျတဲ့ပုံလေး အရမျးကွိုကျလို့ သိမျးထားတာ ၃ နှဈလောကျရှိခဲ့ပွီ…တှ့တှခေ့ငျြး လှောငျပွီး ဟားတိုကျရယျမိတယျ …. ဒီလောကျ ရူးရသလားပေါ့…. ပွီးမှကွညျ့နရေငျး ကွညျ့နရေငျးနဲ့ မရယျရကျတော့ပဲ မကျြရညျဝိုငျးလာမိတယျ။ အဲ့ကောငျမလေးနရော မှာ ကိုယျ့ပုံရိပျကို ပွနျတှလေို့ကျရသလို ၊အဲ့ကောငျမလေးနရောမှာ အမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားရဲ့ပုံရိပျကို ပွနျတှလေို့ကျရသလို ခံစားမိလိုကျလို့ ပါပဲ ။ ကိုယျတို့မိနျးမတှေ ရဲ့ မိုကျရူးရဲဆနျမှု ၊စှနျ့စားမှုတှေ ကိုအဲ့ဓာတျပုံထဲမှာ ပွနျမွငျနရေသလိုခံစားမိတယျ ။ ကိုယျတှကေ ကိုယျ့ကို လှမျးဆှဲတဲ့ လကျတဈစုံကို ယုံကွညျမိတဲ့အခါ ၊ စှနျ့စားရဖို့ မကွောကျတော့တဲ့ ကမ်ဘာ့သတ်တိအရှိဆုံး လူသားတှေ ဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဒီလကျတဈစုံဟာ ကိုယျ့အတှကျ … Read more
အလျှံပါယ် ကြီးပွား ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ၏ လက္ခဏာ
မူရင်း လက်ဝါးပုံ ကိုပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါသည် လက်သူကြွယ် အောက် အဖြူရောင်ဖြင့် ဝိုင်းပြသည့်ထဲကြည့်ပါက “ငါးရုပ်သင်္ကေတပုံ´´ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရမည်။ ငါးရုပ် သည် လက်ဝါးပြင် ၌ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိရှိ ကောင်းကျိုး မင်္ဂလာ ကိုပေးသည်။ယခုပုံ လက်သူကြွယ် အောက်ရှိ ငါးရုပ် သည် မှန်ဘီလူး ဖြင့်ကြည့်စရာမလိုပဲ ထင်ထင်ရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသား ပြထားသည်။ ကျွန်တော်မကြာခဏ တင်ပြခဲ့သည်မှာ…လက်သူကြွယ် အောက်ဂြိုလ်ခုံနေရာ၌ မည်သည့်အရေးကြောင်း-လမ်းကြောင်းလေးမှမရှိ ပြောင်နေသူ (သို့မဟုတ်)ပြားချပ်နိမ့်ဝင်နေသူ တို့သည် ဆင်းရဲသူ-ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိသူ-အခြေ ခံလူတန်းစားသာဖြစ်၏။ လူ့လောက၌…နေရာတစ်ခုခုဖြင့် အဆင်ပြေနေသူထိုက်သင့်သလောက် ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသူကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ချမ်းသာသေူကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အောင်မြင်နေသူတို့၏လက်သူကြွယ်အောက် ဂြိုလ်ခုံသည် မင်္ဂလာ အမှတ်အသား တစ်ခုခု မုချ ဧကံပါရှိနေသည်။ ဤကား…လက္ခဏာ ပညာ ဥပဒေဿ ၏ ထူးခြားချက် ဖြစ်၏။ယခု လက္ခဏာရှင် … Read more
ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါသူများအတွက် ကြီးပွားမည့် လက္ခဏာ
ကြီးပွားမည့် လက္ခဏာ (လက်ခဏာပညာနှင့်ဘဝကံဆက်စပ်နေပုံ) ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ[သို့]နာနာဝိဇ္ဇာသယကြက်ခြေ (ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါသူများအတွက်) ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက်မှာနိုးလာပါတယ်။ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ပြီးရင် တရားထိုင်ပြီးကရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်လေး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ ငါးပါးသီလ လုံစွာနေထိုင်နေပေမဲ့ လောကဓံဒါဏ်ကိုခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ မနေ့ကတော့ ဘုရားစာတွေရွတ်ပေမဲ့ ဘဝမတိုးတက်သူတွေ အနှောင့်အရှက်ခံနေရသူတွေကို ပရိကံလိုအပ်ချက်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ငါးပါးသီလ လုံပါလျက် မပြည့်မစုံဖြစ်နေကြရသော မိတ်တွေအတွက်ပါ။စာတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင် အရာရာပြည့်စုံမယ် ကြီးပွားမယ်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ သုတေသနအရတဝက်မှန်တဝက်မှားပါတယ်လို့ကျွန်တော် အခိုင်အမာပြောပါမယ်။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲဆိုရင်လက်ခဏာပညာရပ်ကို(၁၃)နှစ်သားကစတင်ရင်းနှီးပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်မပြတ်သုတေသနလုပ်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ လက္ခဏာပညာရဲ့အားသာချက်က တွက်ချက်နေစရာဘာပစ္စည်းဘာအထောက်အကူမှမလိုဘဲလက်ကိုယူကြည့်တာနဲ့ ခြုံငုံပြော နိုင်ပါတယ်။မွေးနှစ် မွေးလ ရက်နေ့ဘာမှမလိုပါ။ လက်ခဏာနဲ့ အသေးစိတ်ကတော့ အတိုင်းအထွာ လိုပါတယ်။ဒါပေမဲဗေဒင်ပညာလောက် အနုမစိတ်နိုင်ပါဘူး။သယ်ဆောင်ရတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတာဝန်နည်းပါတယ်။မျန်ဘီလူးတစ်ချပ်ပါရင်ရပါပြီ။ ဝန်ကျဉ်းပေမဲ့ဒီပညာလဲ … Read more
လူတိုင်းကို မချစ်နိုင်ရင်တောင်မှ လူတစ်ယောက်ကို မမုန်းမိအောင် ကြိုးစားပါ
လူ တိုင်း ကို မ ချစ် နိုင် ရင် တောင် မှ လူ တစ် ယောက် ကို မ မုန်း မိ ပါ အောင် ကြိုး စား ပါ ” မုန်း တယ် ” ဆို တဲ့ ခံ စား ချက် က အ မုန်း ခံ ရ တဲ့ သူ ထက် ကိုယ့် ကို ပဲ ပူလောင် စေ တာ မို့ တ ခြား သူ ကို မုန်း တာ က ကိုယ့် ကို ကိုယ် … Read more
၇ရက်သားသမီးများအတွက် ( 6.10.2020) မှ (12.10.2020 ) ထိ တစ်ပတ်တာ ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း
၇ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ဆရာအောင်ချစ်မင်းရဲ့ ( 6.10.2020) မှ (12.10.2020 ) ထိ တစ်ပတ်တာ ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ တနင်္ဂနွေ သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်ပါသည်။အလုပ်မှာမိတ်ဆွေအတိုက်ခံပြောဆိုတာတော့ခံရတတ်ပါသည်။အထူးသတိထားရမှာသူတပါးမကောင်းကြံတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှု့တွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအောက်လက်ငယ်သားမကောင်းကြံတတ်သည်။သတိထားပါ။အလုပ်နေရာကောင်းရနေသော်လည်းစိတ်အနှောက်ယှက်များနေတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက မလုပ်ပါနှင့်ညံ့တတ်ပါသည်။ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ငွေတော့မချေးပါနှင့်အလိမ်ခံရတတ်ပါသည်။သင်၏ကျန်းမာရေးမှာဝမ်းဗိုက်ဥပါဒ်ပေးတတ်သည်။စိုးရိမ်းစရာတော့မရှိပါ။ ပညာရေးကံမှာစိအနှာက်အယှက်တွေများနေရတတ်ပါသည်။သင်၏အချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ချစ်သူ၏စိတ်ကောက်ခြင်းတော့ခံရတတ်ပါသည်။သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာလည်းကောင်းပါသည်။ရေလမ်းခရီးကိုတော့ရှောင်ပါ။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။အုန်း(၆)ညွန့်၊ ရွက်လှ(၄)ညွန့် လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ တနင်္လာ သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။အလုပ်တွင်လည်းတိုးတက်မှု့များစွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။အလုပ်အကိုင်အကြံအစီတွေလည်းတိုတက်လာပါလိမ့်မည်။ယခုအချိန်မှာသင်ကံကောင်းနေပါသည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူးတိုးတက်ပါလိမ့်မည်။အလုပ်မှာလည်းပျော်ရွှင်မှု့တွေရရှိတတ်ပါသည်။လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောင်းပါသည်။လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိတာတွေလည်းပြန်လည်ရရှိပါလိမ့်မည်။ကျန်းမာရေး လည်းကောင်းနေပါသည်။ပညာရေး မှာတော့ ကောင်းနေပါသည်။အောင်မြင်မှု့တွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။ သင်၏ အချစ်ရေးမှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။ပျော်ရွှင်သောအချစ်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာ လည်း ကောင်းပါသည်။အလွန်အကျိုးပေးသောခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာအပြာရောင်ဖြစ်သည်။ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။မေမြို့ပန်း(၅)ပွင့်၊သပြေ(၆)ညွန့်အိမ်ဘုရား … Read more
အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုတာ ဒီလို အချက်တွေ ကြောင့်ပါ…
အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုတာ ဒီလို အချက်တွေ ကြောင့်ပါ… နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အမြဲ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ချစ်မိလိုက် သစ္စာဖောက်သွားလိုက်၊ ချစ်မိလိုက် အထားခဲ့ခံလိုက်ရနဲ့ သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးက ဘယ်တော့မှ ကြာရှည် ရှိမနေ တတ်ပါဘူး။ အချစ်ရေး ကံမကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ကြုံရတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) နားလည်မှု မပေးနိုင်လို့” နားလည်မှု မရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်သူမှ မလိုမရှိတတ်ကြပါဘူး။ သင်က ဆိုးနွဲ့တတ်သူ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်သားကို နားလည်ပေးတာမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဆက်ဆံရေးက မကြာရှည် တတ်ပါဘူး …။ ကိုယ့်ကိုပဲ တဖက်သတ် နားလည်ပေးရပြီး ကိုယ်က နားလည်ပေးဖို့ ဝန်လေးနေတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိသူ ဆိုရင်လည်း အချစ်ရေးကာလ … Read more
ရည်းစားထားခြင်းဟာ တစ်ယောက်ထဲနေခြင်းထက် ပိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့ အချက်များ…
ရည်းစားထားခြင်းဟာ တစ်ယောက်ထဲနေခြင်းထက် ပိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့ အချက်များ… Rs နဲ့ Single မှာ ဘယ်သူတွေ ပိုအားသာလဲ ဆိုတာကိုတော့ အမြဲ ငြင်းခုန်ကြဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ အကြောင်းအရာနဲ့သူ ရှိကြတယ် ဆိုပေမဲ့ Single သမားတွေကတော့ အမြဲ ပျော်ရွှင်နေလေ့ ရှိတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ကိုယ်ရည် တကာယသမားတွေမို့ သူတို့တွေမှာ ပိုလွတ်လပ်နေတာကို ဒီအချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်နော် …။ (၁) သဝန်တိုရတယ်” ချစ်မိတဲ့အခါ အနည်းနဲ့ အများတော့ သဝန်တိုတာ တွဲလျက် ခံစားရတတ်ပါတယ်။သဝန်တိုရတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်ပူပန် ရမှုတွေ တွဲခံစား ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သဝန်တို မိတယ် ဆိုတည်းက ပူလောင်မှု တစ်ခုပဲမို့ စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားရတာပဲ … Read more
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ မှဲ့ပါတဲ့ သူလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်များ…
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ မှဲ့ပါတဲ့ သူလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်များ… နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထား ကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်။ ပွစိပွစိ လုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ …။ သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ် ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူလေးတွေပါ။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ် စိတ်ကောက်လည်း … Read more